samedi, 04 avril 2020 16:50
Coronavirus : Mitohy 15 andro ny « Fahamehana ara-pahasalamana »
Taorian'ny fakan-kevitra nataon'ny Filoham-pirenena tamin'ireo filohana Andrimpanjakana 3: ny Antenimieram-pirenena, ny Antenimierandoholona, ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, dia nandray didim-panjakana ny Filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina, teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra, fa tohizana ary mihatra avy hatrany, manomboka ny 04 Aprily 2020, eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « Fahamehana ara-pahasalamana » (état d’urgence sanitaire) mandritra ny 15 andro noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo fahefam-panjakana.
vendredi, 03 avril 2020 12:35
Coronavirus: Namaky takotra any Etats-Unis, 1200 no maty indray andro, 5 949 no maty hatramin'ny 02 aprily
Raha niadam-pamindra ny fianak'ity aretina coronavirus ity tany Amerika, dia nirogatra tampoka izy, ka tafakatra 1 169 no maty tao anatin'ny 24ora, ka nitondra ny isan'ireo maty ho 5 949 hatramin'ny niatombohan'ity valanaretina ity. Etats-Unis no nahitana olona maty be indrindra ao anatin'ny 24ora maneran-tany ankehitriny, raha 969 no maty tao anatin'ny 24ora tany Italie. 215 417 kosa ireo tratran'ny valanaretina, izay ao New York, Chicago, Nouvelle Orléans ary Montana no tena misy ny foibe maro maty indrindra. Tombanan'ny mpitondra any an-toerana fa hamono olona sahabo eo amin'ny 100 000 ka hatramin'ny 240 000 eo ity Covid-19 ity any Etats-Unis. Any Italie hatreto no mitana ny isan'ny maty be indrindra 13 915, arahan'ny Espagne 10 003, raha 3 305 ny any Chine. Maro ireo manakiana ny tsy nanaovan'ny filoha amerikanina Donald Trump didy fihibohana any an-toerana.
jeudi, 02 avril 2020 22:21
Minisitra Tianarivelo Razafimahefa : « Ny Faritra Analamanga sy Distrikan'i Toamasina 1 sy Toamasina 2 irery ihany no mihiboka »
Hentitra ny Minisitry ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa nanamafy fa « ny Faritra Analamanga sy Distrikan'i Toamasina 1 sy Toamasina 2 irery ihany no mihiboka na manao « confinement » ». Ny faritra rehetra ankoatr'izay, hoy izy tao amin’ny Televiziona Malagasy ny hariva teo, dia « tsy mihiboka fa mahazo mifamezivezy malalaka ny olona sy ny fiara rehetra ».
jeudi, 02 avril 2020 22:13
02 Aprily: Andron'ny Zandarimariam-pirenena
2 aprily 1969 - 2 aprily 2020: nitsingerina androany ny faha-51 nandraisan'ny Malagasy ny fibaikoana ny Zandarimariam-pirenena. Ny Kolonely Ratsimandrava Richard no manamboninahitra Malagasy voalohany teo amin'izany toerana izany. "Tanindrazana sy lalàna" no tarigetran’ny Zandarimariam-pirenena.
jeudi, 02 avril 2020 22:07
Nosy Maorisy: 161 no mitondra ny tsimokaretina coronavirus, 7 no namoy ainy
Tovovavy iray, 22 taona, no namoy ny ainy androany atsy amin’ny nosy Maorisy noho ny tsimokaretina coronavirus. Miisa 161 ny atoandro teo ireo olona mitondra io tsimokaretina io. Nanomboka nisokatra androany ireo tsena sy tranombarotra ao an-toerana, ary dia filaharambe no hita tamin’ireny toeram-pivarotana ireny.
jeudi, 02 avril 2020 16:33
Sary Satelita 16h15
Toetrandro: Niforona ao amin’ny Ranomasibe Indiana ny rivodoza « IRONDRO »
Nitombo hery ka nomena ny anarana hoe « IRONDRO » androany maraina ilay rivodoza niforona ao amin’ny Ranomasibe Indiana. Tsy hisy fiantraikany amin’ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fisiany, hoy ny sampana mpamantatra ny toetrandro.
mercredi, 01 avril 2020 20:02
Toamasina: Tovolahy iray voasambotra nanaparitaka « vidéo porno » amin’ny facebook
Vosambotra tao Valpinson ny tolakandron’ny 30 marsa 2020 ity tovolahy nanaparitaka horonantsary mamoafady na « vidéo pornographique » amin’ny facebook ity, rehefa nataon’ny Zandary manao fikarohana heloka bevava ny fitadiavana azy. Notazomina avy hatrany izy natao famotorana ary hatolotra ny Fampanoavana aorian’izay.
mercredi, 01 avril 2020 19:46
Ikalamavony: Basy tsy ara-dalàna maromaro saron’ny Zandary
Voasoroky ny Zandary ara-potoana ny fanafihana mitam-basy saika hataon’ny andian-dahalo niainga tao amin’ny Fokontany Amboasary, Kaominina Ambatomainty, Distrika Ikalamavony, ny 30 marsa 2020. Tafaporitsaka ireo dahalo vao nahatazana ireo Zandary tonga vao maraimbe. Tavela ny basy roa, saika hampiasain’izy ireo. Teny an-dalana hiverina ireo Zandary iraka hanao fisamborana ireo dahalo ireo, no natolotry ny Tangalamena azy ireo ny basy miisa enina efa voaangona tao an-tanana ihany koa. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 01 avril 2020 19:29
Isotry-Antananarivo: Mpanendaka miisa 02 nosamborin’ny Polisy
Tra-tehaka ambodiomby nangarom-paosy tao an-tsena Isotry izy roalahy ary noentina teny amin'ny Paositry ny Polisy avy hatrany.
mercredi, 01 avril 2020 19:26
Drafitra sosialy: Hiato vonjimaika fizarana fanampiana eo amin'ny Parvis Analakely
Namoaka fanambarana ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo androany 1 aprily fa tsy misy fizarana fanampiana eo amin'ny Parvis Analakely, rahampitso 02 Aprily 2020 noho ny antony ara-tekinika sy ny fikarakarana ara-pitaovana. Holazaina manaraka ny fotoana hanohizana indray ny fizarana ho an'ireo maharay sms avy amin'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. (Jereo Sary Tohiny)